Xaflad soo dhaweyn ah oo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Hiiraan loogu sameeyay Muqdisho (SAWIRO)… – Radio Muqdisho
Xaflad soo dhaweyn ah oo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Hiiraan loogu sameeyay Muqdisho (SAWIRO)…
Xaflad si heersare loo soo agaasimay ayaa maalinti shalay aheyd oo ay taarikhdu ku begneyd 02-01-2015 lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Ujeedka munaasabada ayaa aheyd soo dhaweyn iyo taageerid loo sameeynayay Muna Xasan Maxamed oo dhawaan loo doortay Gudoomiyaha Ururka Dhalinyarda Gobolka Hiiraan.
Munaasabada ayaa waxaa ka qeybgalay qaar ka mid ah xildhibaanada Dowladda federalka Soomaaliya, wasaarka Dhalinyarada iyo Sportiga, ururka haweenka Qaranka Soomaaliyeed, ururka dhalinyarada Qaranka, Siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, ururka midowga ardeyda jaamacadaha, Abwaniin, iyo dhamaan bulshada qeybaheeda kala duwan.
Munaasabada ayaa waxaa daah furay qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolkaas ayagoo Muna u soo jeediyay ammaan iyo bogaadina, waxa ayna ballanqadeen in ay la shaqeynayan Muna ayna ku faraxsanyihiin in ay hoggaan u noqoto dhalinyarada gobolka Hiiraan.
Muna oo muddo badan ka soo shaqeysay arrimaha bulshada ayaa ka soo qeyb galaysha munasabadda ku amaaneen doorkeda waxqadbka lahaa ee ay horey ugu soo shaqeysay gobolka iyo waliba meelo ka baxsan gobolka.
Gudomiye ku xigeenka ururka dhalinyada Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdirashiid oo halkaasi ka hadlay ayaa shegay in ay Muna si dhow ula shaqeyndoonaan ayna soo dhaweynayan ka dhalinyaro ahan.
Xoghayaha guud ee ururka haweenka Qaranka Soomaaliyeed Marwo Faadumo Aadan Cosoble ayaa Muno ugu hanbalyeysay xilka loo doortay waxa ayna sheegaty in ay u qalnto Muna xilkan iyo mid ka sii weyn, maadama ay ilaa yaraanteda ka soo shaqeyneysay arrimaha bulshada..
Marwo Faadumo Aadan oo hadalkeda sii wadata ayaa balanqaadey in Muna loo sameyndoona Caleemo saaar lagu qabandoono Gobolka Hiiraan caasimadiisa Magaalada Baledweyn
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah mudanayaashii ka qeybgalay xafladda ayaa hambalyo iyo soo dhaweynba u muujiyay Gudoomiyaha Cusub Muna Xasan isagoo balanqaaday in Muna uu u galbindoono gobolka, ayna ka qeybgalayan caleema saarka loo sameyndo,
Sidoo kale xildhibaan Cabdullahi Maxamed Aadan ‘Shaacir” ayaa isna ku amaanay dadaalka Muna ay ugu jirto hormarinta dhalinyarada yarada iyo bulshada.
Gabagabadii Munaasabada ayaa waxaa hambalyo dhanka talefanka ah ugu soo qeybqaatay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool Sucuudi, koonfur Afrika,Dubia, America iyo Yurub, ayagoo dhaamaan u hambalyey Muna una rajeyay in ay xilkeda gudato.
Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Muna Xasan Maxamed, oo xaflada soo xirtay ayaa ka qeybgalaysha uga mahadnaqday taageerada ay u muujiyeen, iyadoo balanqaadday in ay wax muuqda ka qabandoonto baahida dhalinyarada gobolka si siman oo laheyn eex iyo nin jecleysi.
Tartan isboorti oo lagu soo gabo gabeeyay degmada Xamar weyne
Waxqabadka Dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay (Sawirro)